Cuntada iyo Nafaqada - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
U shidaal siinta ardatda guusha waxbarasho
Waaxda Adeegyada Cuntada iyo Nafaqada waxay taageertaa horumarka aqooneed iyada oo siinaysa ardayda cunto nafaqo leh iyo adeeg macmiil oo heersare ah.
Ardayda Degmada 196 waxa la siin doonaa quraac iyo qado bilaasha muddada sannad dugsiyeedka 2021-22 taas oo ah deeq ay bixisay U.S. Waaxda Beeraha. Dhammaan qoysaska waxa weli lagu dhiirigelinayaa inay buuxiyaan Codsiga Dheefaha Waxbarashada, oo hore loo odhan jiray codsiga cuntada bilaashka ah ama qiimaha-jaban. Codsi cusub waa in la dhiibo sannad kasta.
Waa aragtida Waaxda Adeegyada Cuntada iyo Nafaqada inay siiso fursad dhammaan ardayda si ay u helaan baahiyaha maalinlaha ee cuntada ay ku qaataan dugsiga. Waxaan bixinaa ikhtiyaaro cunto caafimaad leh oo taageersan siyaasadda fayoqabka degmada.
Codsashada cuntada bilaashka ah ama qiimaha jaban
ARJIGAAN WAXAY TAAGEERAAN DUGSIGAADA!
Codsiga Barnaamijka Faa'iidooyinka Waxbarashada wuxuu kaa caawinayaa bixinta maalgelin muhiim ah DHAMMAAN dugsiyada Degmada 196.
CUNTO BILAASH AH SII WADA
Quraac iyo qado ayaa la siin doonaa dhammaan ardayda 2021-22 iyada oo aan lacag laga qaadaynin iyada oo loo marayo maaliyad gaar ah oo laga helo Maraykanka Waaxda Beeraha. Iyadoo aan loo eegin haddii ardaygaagu u qalmo cunto bilaash ah ama qiimo jaban ah, qoysaska oo dhan waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay dhammaystiraan arjiga Barnaamijka Dheefaha Waxbarashada. Barnaamijkan (oo hore loo yiqiin Barnaamijka Cunnada Bilaashka ah iyo Qiima dhimista) wuxuu siiyaa maalgelin muhiim ah iskuulada kumana koobna kaliya cuntada.
Barnaamijyada Cuntada ee Deegaanka
Markii hore "Sheekada The Sheridan," Cunto kasta waa barnaamij maxalli ah oo ardayda siiya cunnooyinka dhammaadka usbuuc iyada oo aan wax kharash ah iyo boos celin la'aan ah. Si aad u hesho cunnooyinka dhammaadka usbuuca Cunno kasta, toos ula xiriir dugsigaaga.
Waxbadan Ka Baro>
Albaabka Furan waa bakhaar cunto oo ku yaal dhammaan Degmooyinka Dakota wuxuuna u adeegaa qof kasta oo u baahan cunto nafaqo leh. Loo-adeegayaasha ayaa awood u leh inay ku helaan xulashooyinka cuntada caafimaadka leh iyada oo loo marayo bakhaar raashin go'an oo ku yaal Eagan, goobo badan oo Bakhaarrada Moobiilka ah, Sanduuqa Qadada ee La Qaato, iyo barnaamijka Beerta ilaa Miiska.
Kheyraadka Cuntada iyo Nafaqada
Sdejinta akoonka cuntada ee PayPams
Codsiga dibu-maalgelinta/wareejinta akoonka cuntada ee ardayga
Buugga qiimeynta cuntada kala gaarka ah ee dhammaan dugsiyada
Diidmada in la iibsado cuntooyinka kala gaarka ah
Diidmada Iibsiga Foomka Cuntada Ala Carte
Cunto Fudud ee Ala Cart
ISD 196 Codsiga Lacag-celin/Wareejin Xisaabta Cuntada Ardayda Dugsiyada Dadwaynaha
Isuduwaha Adeegyada Cuntada iyo Nafaqada